မီးရထားစီးနေရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတွေရဲ့ အခွီကင်မရာလက်စွမ်းများ - Myanmarload
မီးရထားစီးနေရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတွေရဲ့ အခွီကင်မရာလက်စွမ်းများ
လွန်ခဲ့သော ၁၁ လ က 16:06 August 13, 2019
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ မီးရထားစီးနေရင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဟာသပုံရိပ်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ကယ့်ကို ဟာသဉာဏ်ရွှင်ပြီး လူတိုင်းကိုဆေးလိုက်ထိုးတတ်တဲ့သူတွေရဲ့ ရိုကချက်အလန်းစားလေးတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ လက်ရာဘယ်လောက်တောင် မြောက်သွားလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်သာကြည်ြ့ပီး ရယ်မောလိုက်ကြပါအုန်း ပရိသတ်ကြီးရေ..
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘက်စ်ကားပဲစီးစီး မီးရထားပဲစီးစီး တစ်ခါတလေ အရမ်းပင်ပန်းလွန်းတဲ့အခါ ကိုယ်အိပ်ရာမှာလိုမျိုး လက်လွတ်စပယါ အိပ်မောကျသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မီးရထားပေါ်မှာမှ သူများထက် ထူးပီး ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလုပ်ပြတတ်တဲ့ သူတွေ၇ှိတာကိုလည်း ဒီပုံလေးတွေကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီပုံထဲကလိုမျိုး ကားပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရထားပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်လွတ်စပယ်အိပ်နေရင်းနဲ့ ဆေးထိုးခံရတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့အုန်းနော်...
ပရိသတ်ကြီးအတွက် တစ်ခါတလေမှာ ခုလိုရယ်စရာ မောစရာလေးတွေကို ရှာဖွေပြီး ပြန်လည်ဖော်ပြပေးအုန်းမှာ မို့လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါအုန်းနော်. တစ်နေ့တာလုံးမှာ ပျော်ရွှင်စရာအတိနဲ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်...
Page generated in 0.3194 seconds with5database query and6memcached query.